Xilliga la qabanayo Doorashada Madaxweynaha Galmudug oo lagu dhawaaqay + warbixin!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Xilliga la qabanayo Doorashada Madaxweynaha Galmudug oo lagu dhawaaqay + warbixin!!
Xilliga la qabanayo Doorashada Madaxweynaha Galmudug oo lagu dhawaaqay + warbixin!!
Guddiga doorashada maamulka Galmudug ayaa ku dhawaaqay in doorashada Madaxweynaha maamulkaas ay dhici doonto 21-ka bisha Maarso.
War ka soo baxay Guddiga ayaa lagu sheegay in maalmaha soo socda la bilaabi doono howsha diyaar garowga doorashada Madaxweynaha Maamulka Galmudug, kaddib markii uu is casilay Madaxweynihii hore.
Guddiga ayaa sheegay in doorashada ay ka qeyb geli doonaan Maamulka Ahlusuna Wal-jameeca ee fadhigoodu yahay degmooyinka Dhuusa Mareeb iyo Guriceel.
Musharaxiinta iska diiwaan gelinta doorashada Madaxweynaha ayaa khudbadahooda waxaa ay jeedin doonaan 17-19 bisha Maarso.
Waxaa soo baxaya siyaasiyiin dhowr ah oo u hanqal taagaya qabashada xilka Madaxweynaha Galmudug, waxaana maalmaha soo socda lagu wadaa in Musharaxiin ay ku dhawaaqaan inay u taagay yihiin xilka Madaxweynaha.
25-kii bishan ayay aheyd markii Madaxweynihii Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed uu sababo caafimaad darteed isku casilay, isagoo ku sugan dalka Hindiya, waxaa sanadkii hore lagu sameeyay qalliin dhanka wadnaha
Previous PostMadaxweyne Farmaajo oo ku dhawaaqey in xaalad musiibo Qaran dalka ka jirto Daawo muuqaalka!! Next PostMuuqaal: Ninkii ay Qisada Yaabka leh Hargeisa ku Qabsatay , ee Xaaskiisu Ninka Malxiisada ka Dhigtay oo Hadlay DAAWO!!